Widget Mitemo, Tsigiro uye Kutengesa Mutero | Martech Zone
Chitatu, Ndira 17, 2007 Chitatu, Ndira 17, 2007 Douglas Karr
Mibvunzo yekuda kuziva kune vese vedu vewidget vavaki uye makambani akaburitsa mawadhi
Ndeupi mutoro uripo, kana uripo, wekupa iyo widget yekushandisa kwako? Injini yewijidha ine mhosva here? Widget ine mhosva here? Zvese?
Iwe unotsigira widgets sekunge dai yaive chikamu chekushandisa kwako? Kana ivo vari 'kushandisa panjodzi yako wega?'
Kana iwe uri SaaS kambani isina software inotorwa kana kuiswa, unoita sei mutero wekutengesa paWidgets? Haasi mawijeti, mukukosha, chidimbu che software chauri kugovera? Ndeapi maripo emitero yeizvozvo?
Ini ndinobvunza nekuti takarairwa kuti chero zvinyorwa, midhiya, kana software yatinoendesa inogona kukanganisa chikwereti chekambani, rutsigiro nemitero. Iko kune kwekushandira kana chidimbu chinosanganisa zvinhu zvakaita semajeti?
Izvi zvinonyanya kukosha sezvo maapplication eInternet achiva akasimba. Kunzwisisa kwangu kwaApollo ndechekuti inogona kumhanya sechishandiso kunze kwebrowser, asi ichishandisa tekinoroji yebrowser. Ndezvipi zvinoreva izvo?
Ndokumbira utumire kune chero nyanzvi indasitiri sezvaunogona. Ndatenda!
AT & T Vakandishungurudza Ini Ino Svondo, Asi Vashandi vavo VAKASHURE
Jan 18, 2007 pa 5: 52 AM
Edza munyori weiyi blog http://www.micropersuasion.com/.
Angave achiziva chimwe chinhu.
Jan 23, 2007 pa 4: 10 AM
Iwe unomutsa mibvunzo inoshanda.
Widget ndiko kuwedzerwa kwechiratidzo chekambani kunze kwekambani uye kune imwe 'mumiriri' wekambani pamapeji ewebhu uye pamatafura.
Saka nekudaro, zvakakosha kuti unzwisise zvinorehwa nekushandisa mawijeti sechishandiso uye chekushambadzira.
Ini ndinotenda widget inotakura zvakafanana chikwereti kukambani seyayo RSS feed. Iyo yekushandisa interface inoshandiswa kuratidza zvirimo haina kukosha pane izvo chaizvo zvirimo. Saka ita shuwa kuti zvemukati zviripo.
Desktop mawijeti kunyanya anofanirwa kurapwa zvine hungwaru sezvo iwo ane simba rakanyanya uye kuwana mukana kune komputa yemushandisi zvakananga. Saka hongu, vabate se software yaunogovera.
PaMuseStorm isu tinoshanda nesimba kuQA mawijeti edu uye tinovabata senge chero rimwe bhizinesi software. Ndine chokwadi chekuti vamwe vatengesi vewidget vanoita zvakafanana.
Ndira 23, 2007 na6: 46 PM
Kutenda nemhinduro yako wega, Ori!
Mhinduro yako inoita kunge inotsigira kuti zvese zviri mukati uye software saka ndinofunga isu tichafanirwa kusvika nenzira iyi. Iwe unoziva here kuti vatengi vako vanobhadhara mutero wekutengesa wemajeti akagoverwa - kunyangwe kana vakasununguka kurodha pasi?